DOWNLOAD Corsair F4U-7 FS2004
Ny tantaran 'ny Corsair dia izany basking amin'ny voninahitra ao an-tsain'ny maro ny mpiady, dia "NY" American mpiady ny Pasifika Ady an'i Japana. Ny Silhouette tena mampiavaka ny "vorona amin'ny mivalona elatra" (Bent voro-manidina) dia angamba ho anao! Hatsarana, kanto, mahery, mahomby, dia ny ady ho an'ny Guadalcanal mandra-mpiady Mpanosika ... More noho 11,000 vondrona naorina, 64,000 asa fitoriana tanterahina, 2,140 an'habakabaka fandresena eo amin'ny Japoney fiaramanidina, dia ny miasa izany firaketana an-tsoratra. Tombana vonjimaika ihany koa ny tsara, satria ny 1945 fandresena Japana dia tsy ho famantarana ho azy mba misotro ronono satria dia hita any amin'ny lanitra any Korea, Frantsa, Indochina sy Alzeria. Ho farany piston maotera mpiady ho novokarin'ny ny United States.
Ny maotera dia Pratt & Whitney R 2800-8 2,250 W tsindrona c.
Nisy dikan vaovao dia navoakan'ny Chance-Vought namorona vao haingana manaraka ny fisarahan'ny Vought sy Sikorsky, ary koa ny roa hafa mpanamboatra (Brewster sy Goodyear).
Fa ny firaketana an-tsoratra, fa tsy hatramin'ny 1944, rehefa 4,700 milina efa naorina, ary nalefa tamin'ny fahombiazana goavana miorina amin'ny Pasifika, ny F4U "Corsair" tamin'ny farany nanaiky ny fiaramanidina mitondra. ..
L for Fikarohana jiro.
Manilika-E mba hanokatra sy hanidy ny cockpit.
I fa ny rafitra ny setroka.
Ctrl-Shift-V hanokatra ny cowls mikopaka
Ctrl-Shift-C hanakatona ny cowls mikopaka
Manilika-T for tailhook
Nosoratan'i Lviv Yak42 group & Samdim design
By Emannuel Geffroy (Restauravia.com)
By Terry Jones, Libardo Guzman,Tom Gibson, Greg Pepper
Mivaingana PBY Catalina FS2004
Boeing XB-15 fanandramana Long-Range baomba FS2004
By Julian Adams, Pete Haley, Murray Bremner
By Jerry Beckwith Ignacio Alfredo Mendive Gabriel Mir
By Milton Shupe, Scott Thomas, Joáo Paz
Beechcraft A-28 Mpandringana & xa-38 Grizzly FS2004
By Milton Shupe, Scott Thomas, Damian Radice, Tom Falley et sons de Steve Buchanan
Nosoratan'i Dave Eckert Ralph Pegram Nick Needham Rob Barendre
Nosoratan'i AFG (Allied FS Group)
By Victor Astiz, Gary Jones, Damian Radice
By Guy HULIN Yves Raymond Jean-Pierre Langer Arne
Super kintana VQ-1 Tafika an-dranomasina (Connie) FS2004
By kalyan Mukherjee, Mike Stone, Rick Wooton
Mivaingana PB4Y-2 Privateer 1939 FS2004
By Pierino Primavesi
By Michal Puto
Downloads 21 506
Guy Yves Raymond HULIN Jean-Pierre Langer Arne